Cudurada faafa iyo cibaadada soonka: Taariikhda cudurradii safmarka ahaa ee saameeyay cibaadada bisha Ramadaan
Monday May 18, 2020 - 16:18:52 in Wararka by Burco Staf
Nükhet Varlık waxay ku takhasustay taariikhda dowladdii Cusmaaniyiinta, daraasaddeedu waxay diiradda saareysaa taariikhda cudurrada safmarka ah iyo qaabkii ay muslimiinta isku daweyn jireen xilliggaas. Waxay qortay buug ka hadlayo cudurradii safmarka ee halakeeyay dowladdii cusmaaniniyiinta, waxay su'aalaha ay BBC-da weydisay uga jawaabtay qaab Email ah.
Daacuunkii sannadkii 1420, wuxuu cagta mariyay dalal badan oo muslim ay degan yihiin, wuxuu si aan kala go' laheyn ugu baahay dalal badan, waxaana u dhintay kumanaan kun oo qof. Sannadkii 1422 wuxuu cudurka ku faafay magaalada barakeysan ee Makah oo xitaa salaadihii jamaacada lagu tukan waayay, waxaana haweenka muslimiinta lagu soo rogay xayiraad ah in aysan tegi karin qabuuraha gaar ahaan magaalada Qaahira.
Intii u dhexeysay 1811 iyo 1812, Istanbul waxay la kulantay daacuun faro ba'an ku hayay shacabka kaas oo socday illaa bisha Ramadaan, dadka magaalada waxay ku sugnaayeen guryahooda marka laga reebo inay u baxaan adeegyada aasaasiga ah.
Nükhet Varlık waxay koox kala shaqeyneysaa sidii lagu hergin lahaa nidaam digital ah oo lagu keydinayo taariikhda ku saabsan 'daacuunkii madoobaa' ee hareeyay dunida muslimka, waxayna hayaan ilo wareedyo kala duwan oo aan ku ekeyn buugaagta taariikhda.
Varlık waxay sidoo kale sheegtay in dadka ay isku uruursan jireen kooxo kooxo si ay u cibaadeystaan, xilliga soonka, akhrinta Qur'aanka, caawinta dadka saboolka ah iyo siideynta maxaabiista ayaa sidoo kale jiray.
Sida uu sheegayo taariikhyahankii u dhashay Ruushka Tasbakrizadeh, waxay muslimiinta cibaadeysan jireen 10ka dambe ee soonka, waxay rumeysan yihiin in Qur'aanka uu dawo yahay iyo xuska Alle si looga gaashanto cudurrada faafa, waxaana dadka lagula talin jiray in bukaannada ay siiyaan biyo laga soo hooriyay warqad lagu qoray aayado Qur'aan ah.